IiNdumiso Chapter71 1 Ndizimela ngawe, Yehova, Mandingaze ndidane naphakade: 2 Ngobulungisa bakho ndihlangule, ndisize; Ndithobele indlebe yakho, undisindise. 3 Yiba liliwa elilikhaya kum, ndize kulo ngamaxesha onke. Uwise umthetho wokuba ndisindiswe, Ngokuba ingxondorha yam nemboniselo yam nguwe. 4 Thixo wam, ndisize esandleni songendawo, Esandleni sogqwethayo nosisibhovubhovu. 5 Ngokuba ulithemba lam, Nkosi yam, Yehova, Inkoloseko yam kwasebuncinaneni bam. 6 Ndixhaswe nguwe kwasesizalweni; Nguwe owandityhobozisayo ezibilinini zikama. Indumiso yam ingawe ngamaxesha onke. 7 Ndinjengesimanga kwabaninzi; Ke wena ulihlathi lam elinqabileyo. 8 Umlomo wam uya kuzala yindumiso yakho, Sisihombo sakho imini yonke. 9 Musa ukundilahla ngexesha lobuxhego; Musa ukundishiya akuphela amandla am. 10 Ngokuba zithetha ngam iintshaba zam; Abawulindayo umphefumlo wam bayacebisana, 11 Besithi, UThixo umlahlile; Msukeleni nimbambe, ngokuba akukho mhlanguli. 12 Thixo, musa ukuba kude kum; Thixo wam, khawuleza undincede. 13 Mabadane, bagqitywe, abawuchasayo umphefumlo wam, Bathiwe wambu yingcikivo nehlazo abafuna ukuba ndihlelwe bububi. 14 Ke mna ndiya kuhlala ndilindile, Ndongeze endumisweni yakho yonke. 15 Umlomo wam uya kubalisa ngemisebenzi yobulungisa bakho, Neyosindiso lwakho imini yonke, ngokuba ndingawazi amanani ayo. 16 Ndiya kuza nemisebenzi yobugorha beNkosi uYehova; Ndiya kukhankanya ubulungisa bakho, bakho wedwa. 17 Thixo, undifundisile kwasebuncinaneni bam; Unangoku ndiyayixela imisebenzi yakho ebalulekileyo. 18 Thixo, musa ukundishiya kude kuye ebuxhegweni nasezimvini; Ndide ndiyixele ingalo yakho kwisizukulwana esitsha, Nobugorha bakho kubo bonke abaya kuza. 19 Thixo, ubulungisa bakho buye bafika phezulu; Wena uzenzayo izinto ezinkulu, Thixo, ngubani na onjengawe? 20 Wena, usibonisileyo iimbandezelo ezininzi ezinobubi, Uya kubuya usiphilise, Ubuye usirhole ezinzonzobileni zamanzi ehlabathi; 21 Uya kubandisa ubukhulu bam, Ubuye wena undithuthuzele. 22 Ndiya kuyibulela nokuyibulela kuwe ngomrhubhe Inyaniso yakho, Thixo wam; Ndiya kukubethela uhadi, Ngcwele kaSirayeli. 23 Uya kumemelela umlomo wam, ndakukubethela uhadi, Nomphefumlo wam owukhululeyo; 24 Nolwimi lwam luya kuxela ubulungisa bakho imini yonke, Ngokuba bedanile beneentloni abafuna ukuba ndihlelwe bububi. [ Prev ]